Yini onogwaja abaphuphayo, unogwaja omhlophe, unogwaja ezandleni zabo, ukubaluleka komvundla wabesifazane.
Kusho ukuthini uma ubona onogwaja ephusheni? Ukuchazwa kwamaphupho
Umlenze uyisidalwa esinamandla kakhulu esingaba mnandi, siphuze. Yilezi zinhlangano lapho lezi zilwane zivusa khona. Ngokuyinhloko amaphupho mayelana nonogwaja afanekisela impumelelo nayo yonke into ehlotshaniswa nayo: ukuthuthukiswa komsebenzi, ukukhuphuka kwemholo, umhlangano wokuqala nomuntu oshade naye umphefumulo, impilo yabathandekayo bakho nabakho. Ngesikhathi esifanayo, onogwaja kukhona izidalwa ezinamahloni ezifihla izinkinga. Ngakho-ke, ukuhumusha amaphupho ngamagogasi kungabalwa, konke kuxhomeke emininingwaneni kanye nemicimbi eyandulela iphupho.
Kungani onogwaja abamhlophe abagijima nxazonke bephupha?
Kusho injabulo nenhlalakahle empilweni yomndeni. Uma ushadile, ungase usho futhi ukushesha okusheshayo emndenini, uma uwedwa - esikhathini esizayo esiseduze uzothola uthando oluyoletha injabulo eminyakeni eminingi ezayo. Ngokwezinto ezibonakalayo, izilwane ezinhle ezigijima zizitshela mayelana nemali engenayo eyengeziwe. Ngokuvamile, lezi ziyizici ezifanayo, ngoba uma uhlangabezana nothando lwakho, imali yengeniso yomndeni iyanda ngokwezindleko zomlingani wakho.
Ayini amaphupho onogwaja ababalekela kude
Umqondo wethu ongaqondakali uzama ukuveza iqiniso lokuthi injabulo iseduze, kodwa kubalulekile ukuqoqa amandla, ukusondela nokuwuthatha. Yenza umzamo wokuthuthukisa impilo yakho. Uma lokhu kuyintandokazi - unganqikazi ukuthatha isinyathelo sokuqala emhlanganweni, uma ibhizinisi - lincuma ngalokho okucatshangwa ngakho isikhathi eside, uma umsebenzi - ungesabi ukuya ekhanda ngeziphakamiso noma imibono yakhe.
Unogwaja uphupha ngani?
Lokhu nakanjani kuyimpawu yokuphumelela. Uma unenhlanhla ukubona iphupho, lapho ubamba unogwaja omhlophe ezandleni zakho, khona-ke inhlanhla ayinakugwemeka, uyibambe futhi manje ungayivumeli. Lungiselela ukuthi ukuphila kungashintshwa ngcono. Nokho, konke okuphambene nalokho, uma kumnyama. Kulesi simo, kudingeka uqaphele bese uzama ukuthola ukuthi izinkinga zingavela kuphi.
Wathatha unogwaja ephusheni
Futhi, uma ukwazi ukuwubamba, kusho ukuthi impumelelo iseduze, kodwa kudingeka usebenze kuwo. Lokhu kungasebenza kumlingani oyithandayo, kodwa akakakunakeli ngaphambili. Ngokushesha, isimo singashintsha, futhi uzoba nobuhlobo obude nomuntu onjalo.
Uma kwakumnyama, omunye wabantu abakuzungezile ufuna ububi futhi maduzane uzosuka ezifisweni zawo ezenzweni zangempela. Enye indlela - indoda owake wafuna, akusikho okwakucabanga ukuthi uyakunakho nokudumazeka okukulindele.
Unogwaja olungiselelwe ephusheni
Kulesi simo, ulindele abantu abajwayele ukuxhumana nabo, noma ukuqinisa izibopho zakudala. Ungalindela ucingo oluvela esoka langaphambili noma indoda, umngane omdala, umhlangano nabangani besikolo noma ekolishi. Mhlawumbe, uzojwayelana nensizwa, ukusondelana kungenzeka, kepha akufanele ulindele ukuqhubeka kobuhlobo obunjalo.
Uma sicabanga konke okushiwo ngenhla, ezimweni eziningi (abanogwaja abamnyama namanje bangama-rarity) lapho unogwaja ephuphile, khona-ke umuntu angaphefumulela ukuphefumula. Ekuphileni kwakho konke kuyoba kuhle, umsebenzi noma ibhizinisi lizoletha imali engenayo, futhi ebuhlotsheni bomuntu konke kuyoba ngcono nakakhulu, noma ubuhlobo obunjalo buzoqala kuqala kulabo abodwa.
Uma onogwaja emaphupheni akho anemibala ehlukene, ngaphandle kokumnyama noma kumhlophe, akukho lutho olubi alusho lutho. Okuhlukile kuphela umbala obomvu, ojwayele ukuhlotshaniswa nesifo noma ukulahlekelwa, kodwa hhayi ngokumnyama. Noma kunjalo, ngokusebenza, lokhu kuyisimo esihle kakhulu. Ngokuvamile, izifo, ukwehluleka nezinye izinto ezingathandekayo zivela ngaphansi kwezithombe ezihluke ngokuphelele.
Ngabe kusho ukuthini amaphupho angenangqondo?
Ama-Supermodels abelana ngemfihlo yemidlo yabo
Ama-pancake ama-egg enyama
Ubuchwepheshe bezimangaliso, noma Yini i-SPA-capsule
Biography Pelevin, amaqiniso ezithakazelisayo zokuphila
UBretney Spears wahlukana nesinye isoka
Iphunga lezinyawo, ukuqeda kanjani ekhaya
I-Linzer ye-Cake enama-raspberries nama-apula
I-Alaska i-pollack e-foil
Isinkwa ku-Serum ku-Baker
Iyini i-croupa kinoa nalokho okudlayo: iresiphi yangempela yesaladi enempilo nangempilo evela kumculi u-Valeria
Umlingisi we-Movie uRenee Zellweger
Yeka ukuthi ungatholi isisindo ngesikhathi ukhulelwe